स्वास्थ्य पेजयौन सम्पर्क कम गर्ने महिलालाई रोग लाग्ने जोखिम किन ? - स्वास्थ्य पेज यौन सम्पर्क कम गर्ने महिलालाई रोग लाग्ने जोखिम किन ? - स्वास्थ्य पेज
यौन सम्पर्क कम गर्ने महिलालाई रोग लाग्ने जोखिम किन ?
young sexy couple in love lying in bed in hotel, embracing on white sheets, close up legs, romantic mood.
धेरै कम यौनसम्पर्क गर्नेहरुको चाँडै महिनावारी रोकिने एक अध्ययनले पत्ता लागेको छ। अनुसन्धानकर्ताले सप्ताहमा एकपटक यौनसम्पर्क गर्नेहरु भन्दा महिनामा एकपटक यौनसम्पर्क गर्नेहरु २८ प्रतिशतले चाँडै महिनावारी रोकिएको पत्ता लगाएका हुन्। यौनसम्पर्कका कारणले शारीरिक रुपमा गर्भवती हुने अंगहरु क्रियाशिल भइरहने भएकाले महिनावारी राकिंदैन।